Qabiilka iyo dalabka qoxootinimada | Somaliska
Dadka Soomaalida ee iska dhiiba wadamada dibada ayaa inta badan sheegta beelaha yar yar haddii ay ka dhasheen beel wayn ayagoo ka cabsi qaba in arintaan ay ku keento in la yiraahdo adiga waxaad ka dhalatay beel hubaysan. Balse arinta ayaa sidaa ka duwan dalkan Iswiidhan Hay'ada Socdaalka ayaan inta badan daneyn qofka beesha uu ka dhashay qaasatan marka uu sheegto qofku in uu ka yimid magaalada Muqdisho. Ayadoo xiliyadii hore ay arinta qabiilka ay door ka ciyaari jirtay go'aanka Hay'ada Socdaalka, ayaa arintaas hada aysan door ku laheyn maadaama ay aaminsanyihiin in colaad ay ka jirto magaalada Muqdisho oo qaasatan ay aaminsanyihiin ururada ka dagaaladama Soomaliya in aysan qabiil gaar ah cafis u fidin. Walow ay u badan tahay in beeshaada dhowr su'aalood lagaa waydiiyo, balse muhiim ma ahan in aad beel aan beeshaada ahayn sheegato.
Qabiilka iyo dalabka qoxootinimada
Dadka Soomaalida ee iska dhiiba wadamada dibada ayaa inta badan sheegta beelaha yar yar haddii ay ka dhasheen beel wayn ayagoo ka cabsi qaba in arintaan ay ku keento in la yiraahdo adiga waxaad ka dhalatay beel hubaysan.
Balse arinta ayaa sidaa ka duwan dalkan Iswiidhan Hay’ada Socdaalka ayaan inta badan daneyn qofka beesha uu ka dhashay qaasatan marka uu sheegto qofku in uu ka yimid magaalada Muqdisho.
Ayadoo xiliyadii hore ay arinta qabiilka ay door ka ciyaari jirtay go’aanka Hay’ada Socdaalka, ayaa arintaas hada aysan door ku laheyn maadaama ay aaminsanyihiin in colaad ay ka jirto magaalada Muqdisho oo qaasatan ay aaminsanyihiin ururada ka dagaaladama Soomaliya in aysan qabiil gaar ah cafis u fidin.
Walow ay u badan tahay in beeshaada dhowr su’aalood lagaa waydiiyo, balse muhiim ma ahan in aad beel aan beeshaada ahayn sheegato.